Dadka Reer Algeria Oo Ka Gilgishay Madaxweyne Markii Shanaad Xildoon Ah – somalilandtoday.com
Dadka Reer Algeria Oo Ka Gilgishay Madaxweyne Markii Shanaad Xildoon Ah
(SLT-Algeria)-Kumaan qof oo reer Algeria ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka ayagoo ka caraysan qorshaha madaxweynaha 81 jirka ah ee Abdelaziz Bouteflika uu ku doonayo in uu mar shanaad madaxtinimada dalkaas isu soo taago.
Booliiska ayaa sunta dadka ka ilamysiisa u adeegsaday dad dibadbaxyo ka dhigayey magaalada caasimadda ah ee Algiers.
Waxaa aad u yar in dibadbaxyo dawladda looga soo horjeedo ay ka dhacaan dalka Algeria hase ahatee dhowr mudaharaad ayaa dillaacay kadib markii la xaqiijiyey in Mr Bouteflika uu musharax yahay.
Waxaa aad u yarayd in fagaareyaasha lagu arko tan iyo markii uu kusoo booday xanuunka qalalku sanadkii 2013-kii, wuxuuna haatan baadhitaano caafimaad ku marayaa dalka Switzerland.
Dadweynaha oo Jamcihii socod ku dhex maray magaalada caasimadda ah ee Algiers, ayaa qaar dibadbaxayaasha kamid ah waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin “iskatag macnaheedu waa iskatag”.
“Labaatan sano kugu filan” ayay tiri haweeney ay soo xigatay wakaaladda wararka ee AFP, taas oo dibadbaxa ay ku weheliyeen saygeeda iyo caruurteeda.
Qaar kamid ah dibadbaxayaasha ayaa dhagxaan ku tuurayey meel u dhow aqalka madaxtooyada waxaana gadaal u celiyey booliiska oo ku furay sunta dadka ka ilmaysiisa. Goobjoogeyaal ayaa sheegay in labadaba dhinacba ay dhaawacyo jireen.
Dibadbaxyo kale ayaa sidoo kale salaaddii jimcada kadib ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo kuyaal Algeria.
Mr Bouteflika ayaa xukunka dalkaas qabsaday sanadkii 1999-kii wuxuuna sumcad ka helay in uu soo afjaray dagaal sokeeye oo galaaftay in kabadan 100,000 oo qof.
Dibadbaxyo looga soo horjeedo qiimaha maciishadda iyo shaqo la’aanta ayaa qarxay sanadkii 2011 intii uu socday gu’gii Carabta hase ahaatee wuxuu kaga jawaabay in uu qaado xaaladdii dagdagga ahayd ee dalkaas saarnayd kudhawaad 20-ka sano, arrintaas oo ahayd dalabka koowaad ee dibadbaxayaasha.
Kadib markii uu ku dhacay xanuunka stroke-ga loo yaqaan waxa uu ku guulaystay in markale dib loo doorto, mucaaradka ayaana doorashadaas qaaddacay waxa uuna kala diray hay’addii sirdoonka dalkaas, asagoo ku baddalay hay’ad asaga daacad u ah.
Dadka dhaliila ayaa sheegaya in caafimaad darradiisu ay ka dhigan tahay in aanu gudan Karin waajibaadkiisa madaxweynenimo.
Marka laga yimaado walaaca mucaaradka, Mr Bouteflika ayay u badan tahay in uu si ballaaran ugu guulaysto doorashada April.